I-Mol Ban, e-Isle of Harris - I-Airbnb
I-Mol Ban, e-Isle of Harris
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAlan
Ikude ngeemoto nje ezimbalwa ukusuka eTarbert kwitheku elisecaleni yi-Mol Bàn, indlu ye-croft yesintu ekuthiwa yi-Hebridean. I-Mol Bàn nestles kwikota yeegadi, kunye nendlela ekhokelela kumnyango wangaphambili ukuya elunxwemeni lwakho lwe-pebble.
I-Mol Bàn ikwindawo entle onokuzuza kuyo xa uhamba ngeenyawo, ii-loch zokuloba, iigalari zobugcisa, kunye neIsle of Harris Distillery. Iindwendwe zethu ziyakonwabela ukubona ubuhle bendalo kwaye zonwabele ukubona izilwanyana zasendle kwitheku.
I-Mol Ban inikezela ngendawo yokuhlala etofotofo nevulekileyo enamagumbi okulala amathathu amakhulu (i-2 king double ne-1 twin) anokulala abantu abathandathu. Amagumbi amabini amakhulu okwamkela iindwendwe anika intsapho indawo eyaneleyo, okanye abahlobo kunye negadi enkulu enonxweme lwakho olunamatye agangathiweyo apho abantwana banokudlala khona, bathathe iinethi zabo zokuloba baze babuke iindawo. Indlu esemaphandleni ilungele yonke imozulu, kuquka i-wifi, igumbi le-Sky TV, ilayibrari encinci eyahlukeneyo, ikhabhathi yemidlalo enezinto ezininzi, itafile yentenetya kunye nepiyano yomntwana! Umlilo ovuliweyo nebhafu ye-Jacuzzi zenza kube mnandi ukubuya unyuke intaba. Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ngeoveni, i-electronic hob, i-microwave, umatshini wekofu we-Nespresso, kunye nomatshini wokuhlamba izitya nefriji. Kukho indawo eyahlukileyo yezinto ezisetyenziswayo enomatshini wokuhlamba impahla nowokomisa i-umble. Kukho amagumbi okuhlambela ayi-2 (igumbi lokulala eliyi-1)
Nceda uqaphele ukuba ukufikelela kule ndlu isemaphandleni kuyafunyanwa kusetyenziswa ikhowudi ebalulekileyo enikwa iindwendwe ngaphambi kokuhlala kwazo. I-Molban ifikelelwa ngamanyathelo akhokelela kwindlu ibe ayifanelekanga kuye nabani na onenkxalabo yokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Alan
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Na h-Eileanan an Iar